Lahateny teny Iavoloha 8 zanvie 2016 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hatreo fotsiny dia mba mametraka fanontaniana aminao aho : vita noho ny fahagagana toa inona izany tompoko raha tsy niasa ny Fitondrana ?
- Mbola anaty fahasahiranana ny firenentsika. Lazaiko anareo am-pahatsorana fa tsy mora ny fikarohana ny fomba rehetra ahatafavoaka antsika satria tsy azo tere-ko masaka toa volobo-jaza ny fanarenana ; mandroso isika fa misy ihany koa ireo misintona hihemotra foana.
Dia ambarako amin'ny teny tsotra sy mazava ary iantsoako anao hanamafy izany : tapitra ny fifampitsapatsapana sy fifamandrihana ara-politika. Tonga ny fotoana ampivondronana ny hery ho amin'ny fanafainganana sy fampatanjahana ny fiharian-karena. Maika hivoaka ny hantsan'ny fahantrana ny Malagasy sy i Madagasikara.
Hajaintsika ny zo haneho hevitra sy ny fahalalahana noho ny maha-demokraty antsika. Aoka kosa tsy hisy ny fihoaram-pefy mitondra amin'ny fampiadiana ny samy Malagasy, ny fanelezana lainga sy tsaho hampisavorovoroana ny saim-­bahoaka, ny fanitsakitsahana ny zon'ny tsirairay.
Amin'ity taona 2016, vola 47 mialara Ar no atokana ho an'ny fikojakojana ka tsy hisy lalam-pirenena ahitan-davaka izany intsony. Efa hitan'izay mampiasa ny Ialam-pîrenena faha 4 (Mahajanga) sy faha 2 (Toamasina) faha 9 (Toliara mankany Morombe) sns.. izany, ohatra.
NOHO IZANY dia NANAPA-KEVITRA NY FITONDRAM-PANJAKANA FA :
- Ireo tany midadasika maro be izay efa vita titra tamin'olon-tsotra fahiny kanefa nilaozan'ny tompony ary tsy nokarakarainy intsony ka nampiasain'olon-kafa maro nandritry ny fotoana naharitra dia haverina ho fananam-panjakana ary homena ireo olona voaporofo fa nampiasa sy nanamainty molaly azy.
- Eo amin'ny lafiny angovo, dia afainganina ny fironana miandalana mankamin'ny angovo azo havaozina manomboka izao, hampihenana ny fanampian'ny fitondrana ara-bola ny JIRAMA sy hanomezana angovo madio sy maharitra ary mora vidy ho an'ny rehetra.
- Henoko ny fitarainanareo vahoaka noho, ny tabataba aterak'ireo milina manome herinaratra. Tsy maintsy manolotra anatin'ny 1 volana ny vaha olana mikasika ny foibe famokarana herin'aratra eny Antanandrano, izay namaha ny olana famatsiana, fa niteraka olana hafa eo amin'ny tontolo iainana noho ny firaondraonany, ny JIRAMA sy ny ministera mpiahy ;
- Miantso koa aho ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hanao ho laharam-pahamehana tsy azo andeferana ny fanadiaovana ny tanàna, na ny eto Andrenivohitra izany na amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Mila alamina ny fitsinjarana andraikitra eo amin'izay voakasika rehetra. Fa ny ahy dia tsotra : tsy rariny no sady tsy hitsiny ny ampiainana ny mponina anaty fofona tsy azo laizina izay hidona hatrany amin'ny fahasalaman'ny olona.
- Tohizana sy hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana ka andrafetana famaizana manokana ireo mpandoro tanety
- Miantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny vahoaka tsirairay hanamafy ny ady amin'ny kolikoly
- Tohizana sy hamafisina ny fametrahana ny fandriampahalemana manerana ny nosy, ka hiadiana ami'ireo herisetra isan-karazany. Misaotra sy mankasitraka ireo miaramila sy zandary nampandry fahalemana ary mankahery ireo fianakaviana navelan'ny niaram-boina rehetra.
Manomboka amin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny fampandehanan-draharaha izany, mitohy amin'ny fahaiza-miasa tsara, fahaiza-miasa haingana. Takian'izany koa ny mpitarika mazava saina, mahataka-davitra, manampahaizana ka mahasaky mampiova ny làlan'ny Tantara amin'ny alalan'ny asa izay tarihiny. Vita izany rehefa ombam-piniavana eo amin'ny rehetra.
Izay no zaka ary ny fanantenana dia ny fiakaran'ny fahafa-mividy ankapobeny no hiakatra ao aoriana. Mila ezaka goavana ny fampidiram-bolam-panjakana satria ny 60 % ny vola miditra rehetra amin'ny hetra sy ladoany no atokana andoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana.
Ho faranako ny teniko
Miaradia aminareo lalandava ny tenako, mahita, mandre, mihaino. Hoy aho teo hoe, ny fanantenanareo fihatsaram‑ piainana no manavao isan'andro ny herim-poko eo amin'ny adidy sy andraikitra iantsorohako. Ny fanantenanareo no ilo mby an-dohako ka tsy handraraka izany an-tany aho.